Fanompoam-pivavahana teo Mahamasina : « TERORISTA » IRAY VOASAMBOTRY NY CIRGN -
AccueilRaharaham-pirenenaFanompoam-pivavahana teo Mahamasina : « TERORISTA » IRAY VOASAMBOTRY NY CIRGN
30/01/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Nitsefotra ny fikasan-dratsin’ireo « mpampihorohoro » saika hanapoaka baomba tetsy Mahamasina nandritry ny fotoam-bavaka lehibe notarihin’ny Kardinaly Piertro Parolin sekretera jeneralin’ny Vatican. Voasambotra ara-potoana ny mpitsikilon’ireto « mpampihorohoro » ireto. Tamin’ny 10 ora latsaka fahefany, no tra-tehaky ny zandary avy amin’ny Cirgn Antananarivo i Nivo Hanitriniala Mampionona Ravoniarisoa. Nampiahiahy ny fihetsiny. Nohamafisina ny fitiliana azy manokana ka niafara tamin’ny fisamborana azy. Tamin’ny fanadihadiana savaranonando natao taminy no nahalalana fa mpiara-miasa akaiky amin’i Kolonely Lylyson sy Alain Ramaroson izy. Ny asan’ny fitsikilovana sy fanangonam-baovao ary mpanome vaovao an-dry Kolonely Lylyson no asany. Nahitana “puce”- na finday miisa dimy teny aminy niampy “karine” misy fitanana an-tsoratra sy nahitana laharan-taribia mampiahiahy ihany koa.
Efa notanany an-tsoratra avokoa ny anaran’ireo tompon’andraiki-panjakana tonga nanotrona an’ity fotoam-bavaka lehibe tao Mahamasina ity. Izay tsiahivina moa fa tonga teny koa ny filohan’ny Hat sy ny filoham-pirenena teo aloha toa an-dRavalomanana Marc sy Zafy Albert. Tsy azo lavina, fa raha ela fiasa ny zandarin’ny Cirgn Antananarivo, dia sanatriavin’ny vava miteny fa “ 26 jona 2016 bis” no nitranga teo Mahamasina, omaly. Dia ho mora foana ny handoto ny fitondrana ankehitriny amin’izany sy ny fandroritana izany ho politika maloto. Mahay zavatra anefa Andriamanitra, ka dia tra-tehaka ny “terorista” vehivavy saika hamoa-doza.
Tsaroan’ny rehetra fa nipetrapetraka mihitsy ny paikadin’ireo mpampihorohoro tamin’iny 26 Jona iny. Nisy ny mpitsikilo efa nifangaro taman’olona tao anaty kianja. Io olona io avy eo no miantso ilay tambazotra miaraka aminy nitondra ny “baomba”. Fotoana fohy nialan’ny manam-pahefana teny amin’ny “ Podium ” dia nipoaka ilay baomba. Nahafatesana olona roa ary nandratrana olona mihotra ny 60 izany. Saika io sary nahatsiravina io no tadiavin’ireto olon-dratsy naverina omaly. Soa ihany fa nanao ny asany ny mpitandro ny filaminana.
Rolly Mercia – T.R.
Notokanana tamin’ny fomba ofisialy ny sabotsy teo, ny asa fanavaozana ny fiangonana anglikana Santa Paoly Ambatoharanana, ao amin’ny kaominina Merimandroso, ao anatin’ny distrikan’Ambohidratrimo. Isan’ny nohavaozina ny vatan-drindrina vita amin’ny vato manontolo, ny tafo sy valin-drihana, ...Tohiny